Bogga ugu weyn Lacag intee leeg ayaan u baahanahay si aan ugu fariisto Kanada?
Waxaa jirta run -sheegga oraahdan caanka ah - Hawlgabku waa waqtiga kaliya ee noloshaada marka wakhtigu uusan u dhigmin lacag. Tani waa sababta oo ah inta lagu jiro waqtigan ma heli doontid waqti iyo dadaal kugu filan si aad lacag badan u samaysato.
Taasi waa sababta ay u habboon tahay kaydinta lacag aad u badan ka hor da'da hawlgabkaaga ayaa ah habka ugu wanaagsan uguna caqli badan ee loogu diyaar garoobo hawlgabnimada.
Iyo meel sida Kanada oo kale ah oo ka mid ah waddamada ugu wanaagsan hawlgab iyada oo la tixgelinayo doorashooyin badan oo nololeed oo waddanku siinayo hawlgabyadiisa, iyadoo la ogaanayo inta aad dhinac iska haysan karto ayaa wax badan ka tari karta in muddada hawlgabkaagu qiimo yeelato.
Waxay ku jirtaa qoraalkan in aan maqaalkan ka dhignay. Maqaalkani wuxuu ka hadlayaa su'aasha 'Lacag intee le'eg ayaan u baahanahay si aan ugu fariisto Kanada?'.
Waxay kaloo bixisaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qorshayaasha hawlgabka wax ku oolka ah ee Kanada iyo waxyaabo kale oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato nidaamka hawlgabka Kanada.
Markaad eegto dhacdada…
Tani waa sannadka 2021, iyo markii uu ka dillaacay masiibada iyo nabaad-guurka xakamaynta dhaqaalaha, qof walba waxaa lagu qasbay inuu dib-u-fiiriyo oo uu dib-u-habeeyo habka maaliyadeed loo sameeyay ka hor covid-19.
Intaas waxaa sii dheer, waxaan dhammaanteen markhaati ka nahay saamaynta dhacdooyinkii sannadkii hore ku yeeshay dadka hawlgabka ah, oo ay ku jirto kororka ku tiirsanaanta waraaqaha dawladda iyo la'aanta ilo kale oo dakhli.
Shaqaalahaas oo si lama filaan ah bilaa shaqo u noqday ayaa isku dayay inay ka laabtaan kaydkii hawlgabka, laakiin sharciyada qufulka ee xeerka hawlgabka awgood, ka noqoshada xuquuqda hawlgabka suurtogal ma aha.
Iyada oo ay taasi jirto, ayaanad ku sugnayn xaalad adag; ka dib oo dhan, waxaad qaadday tallaabadii ugu horraysay xagga iftiimin weyn oo ku saabsan sida loo waco waqtiga adeegga adigoon ka walwalin sida ay noqon doonto.
Hawlgabku waa ka saaridda shaqadiisa ama mihnadiisa, ama nolosha shaqada ee firfircoon. Dhinaca kale, hawlgabnimada badhkeed micnaheedu waa dhimista saacadaha shaqada ama culeyska shaqada. Dad badani waxay rabaan inay hawlgab noqdaan maadaama ay aad u gaboobeen ama aysan shaqayn karin.
Dadku waxay kaloo hawlgab noqon karaan marka ay u qalmaan macaashka hawlgabka gaarka ah ama kan guud, laakiin qaar baa lagu qasbaa inay hawlgab noqdaan sababtoo ah xaaladdooda jireed uma saamaxeyso inay shaqeeyaan.
Tirakoob ahaan, inta badan dadka Kanada waxay yiraahdaan waxay u baahan doonaan $ 756K oo kayd ah si ay uga fariistaan.
Marka loo eego sahanka CIBC ee la sameeyay Febraayo 2018, Tani, dhab ahaantii, ma ku filan tahay? Waxaad u baahan kartaa lacag badan, laga yaabee nus-milyan, milyan, laba milyan, ama ka badan.
Waa muhiim inaad u diyaargarowdo hawlgabkaaga, kaas oo aad samayn karto adiga oo go'aaminaya inta lacag ah ee aad u baahan doonto si aad u noqoto mid raaxo leh.
Akhri Sidoo kale: Sida Looga Hawlgaliyo 50 -ka Milyaneer ahaan! Riyooyinka Hawlgabka
Waa maxay Qorshaha Hawl -gabka?
Reqorsheynta daalka waa geedi socodka go'aaminta yoolalka dakhliga hawlgabka, dulqaadka halista, iyo ficillada iyo go'aamada lagama maarmaanka u ah in la gaaro himilooyinkaas.
Qorshaha hawlgabka oo si fiican loo fuliyay wuxuu soo saaraa farsamo lagu dheellitiro dakhliga kaa maqan markaad hawlgab noqoto.
Inaad haysato wakhti badan oo firaaqo ah oo aan dakhli lahayn waxay noqon kartaa dhibaato. Tani waa meesha diyaarinta hawl -gabka iyo qorshayntu ka soo baxdo.
Qorshaynta hawlgabka, oo ah qaabka ugu aasaasiga ah, waa u diyaargarowga nolosha ka dib markay dhammaato shaqada mushaharka leh, ma aha oo kaliya dhaqaale ahaan, laakiin dhammaan dhinacyada nolosha.
Tixgelinta aan dhaqaalaha ahayn waxaa ka mid ah go'aammada hab-nololeedka sida sida loo qaato wakhtiga hawlgabka, meesha lagu noolaado, goorta la joojiyo gebi ahaanba shaqada, iyo wixii la mid ah.
Qaab dhammaystiran oo loogu talagalay qorshaynta hawlgabku wuxuu tixgelinayaa dhammaan arrimahan, Muhiimadda ay dadku u leeyihiin qorshaynta hawlgabka ayaa isbeddelaya marka ay nolosha ku hormaraan.
Bilowga nolosha shaqada ee qofka, diyaarinta hawlgabku waxay ku jirtaa in lacag meel looga dhigo hawlgabka.
Dajinta dakhliga cad ama yoolalka hantida iyo qaadista tallaabooyinka lagu gaarayo ayaa sidoo kale lagu dari karaa badhtamaha xirfaddaada.
Markaad garaacdo da'da hawlgabnimada, waxaad ka gudbeysaa marxaladda aruurinta oo aad u gudubtaa wejiga qeybinta, sida ay ku qeexeen qorsheeyeyaasha maaliyadeed.
Hadda ka dib wax ku darsanaysid; halkii, tobanaankii kayd ee aad bixisay ayaa la bixiyaa.
Waa maxay Dakhliga Hawl -gabka ee Kanada?
Sida laga soo xigtay advisorsavvy.com, Celceliska hawlgabka Qorshaha Hawlgabka Kanada waa kaliya $ 8,303 sanadkii haddii aan wax lagu kordhin.
Sanadka 2019, celceliska mushaharka billaha ah ee CPP wuxuu ahaa $ 723.89, taasoo 37% ka yar xadka $ 1,154.58.
Tani waxaa sabab u ah xaqiiqda ah in dad badani aysan sameynin lacag ku filan inta ay ku guda jiraan xirfadooda si ay u helaan abaalmarinta buuxda.
Natiijo ahaan, celceliska Kanadiyaanka ma laha helitaanka xadka, oo aan ahayn mushahar nololeed oo laga bilaabo.
Dhanka kale, marka loo eego warbixintii 2016, wadarta kharashaadka nolosha Kanada ee dadka ka weyn 65 sano waxay ka yaraayeen $ 60,000.
Taasi waxay keentaa farqi weyn oo u dhexeeya waxay haystaan ​​iyo waxa ay u baahan yihiin si ay si raaxo leh uga fariistaan.
Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in la go'aamiyo meesha aad ka heli doonto farqiga dakhli iyo inta aad u baahan doonto si aad hawlgab ugu noqoto Kanada.
Akhri Sidoo kale: Maxaan Ku Sameeyaa Lacagtayda? 10 Fursado Maalgashi oo Cusub sanadka 2021
Waa maxay Fursadaha Qorshaynta Hawlgabka?
Waxaa jira dhawr doorasho oo qorshaynta hawlgabka ah, waxaana ka mid ah:
1. Qorshaha Hawlgabka Kanada (CPP)/Qorshaha Hawlgabka Quebec (QPP)
Waxaad bixinaysaa CCP inta ka dhiman noloshaada shaqo. Markaad hawlgab noqoto, waxaad runtii awoodi doontaa inaad ku raaxaysato abaalmarinta taas.
Markaad hawlgab noqoto, waxaad bilaabi kartaa inaad hesho jeegagga billaha ah ee Guddiga Maalgelinta Qorshaha Hawlgabka Kanada.
Lacag -bixinta waxaa la sameeyaa iyadoo ku xiran inta aad wax ku biirisay iyo inta aad ku biirisay. Ka dib da'da 60, waxaad bilaabi doontaa inaad lacag gasho.
Iyadoo aan loo eegin inta ay le'eg tahay ama inta aad wax ku biirineyso, waxaan aaminsanahay inaan dhammaanteen isku raacno in lacag -bixintaan bil walba aysan ku filnaan doonin taageeridda jiritaan nololeed.
Nooc kasta oo kaydinta hawlgabka oo dheeri ah ayaa loo baahan yahay.
2. Hawlgabka Amniga Waayeelka (OAS)
Kani waa dheef aan la garanayn oo qof kasta oo Kanada jooga uu xaq u leeyahay marka ay gaaraan da'da 65.
Tani waxay khusaysaa haddii aad hore u shaqeysay iyo haddii kaleba. Waxba kuma tabarucdid barnaamijka si la mid ah sida aad ugu biiriso CPP.
Lacag -bixintuna waxay ku xiran tahay muddada aad Kanada ku noolayd.
Akhri Sidoo kale: 10 Sababood oo ah inaan ka fariisto Kanada | Waxa kaliya oo ay tahay inaan ogaado
3. Dheeraadka Dakhliga Dammaanad Leh (GIS)
GIS, si ka duwan labadii qorshe hawlgab ee hore, waxaa loogu talagalay si gaar ah dadka dakhligoodu hooseeyo.
Kuwa u baahan, waxay u tahay dhammaystirka OAS. Canshuur celintaada dakhliga ayaa go'aamisa haddii aad u qalanto GIS iyo in kale.
4. Qorshayaasha Hawlgabka
Qorshayaasha hawlgabka shaqaalaha waxay ku yimaadaan qaabab iyo qiyaaso kala duwan. Kuwo kale ayaa iskood u haga, halka kuwa kale ay maalgeliyaan loo-shaqeeyayaashooda, qaar kalena waa isku-darka labada.
Xulasho kasta oo aad doorato, waxaa fiican inaad ka faa'iidaysato fursad kasta oo loo -shaqeeyahaagu kaa caawinayo kaydinta hawlgabka.
Loo -shaqeeyayaashu waxay kaliya wax ku biirin karaan qorshaha hawlgabka ee gaarka ah marka la qabanqaabinayo. Yacni, ka dib tiro cayiman oo adeeg ah, waad qaadan doontaa markaad baxdo.
Muddo sanado ah oo adeeg ah, waxay si buuxda u bixinaysaa hawlgabnimada.
Qorshayaasha kale waxay kuu oggolaanayaan inaad lacag u dhigato hawlgab xilli kasta oo mushahar ah. Loo -shaqeeyahaagu waxaa laga yaabaa inuu la mid noqdo ama uusan la mid noqon karin boqolkiiba ama doolarka waxa aad ku biirisay.
Shaqo -bixiyeyaasha qaarkood kuma biiriyaan qorshe, laakiin waxay kugu dhiirri -gelinayaan inaad dhisto kayd khasab ah iyagoo ku siinaya fursad aad lacag ugu shubto RRSP ka hor inta aan laga jarin jeegaaga mushaharka
5. Estate Real
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee lahaanshaha guriga ayaa ah inay tahay fursad aad u fiican kaydinta hawlgabka.
In badan oo naga mid ah waxay iibsadaan guryo qoys oo aanaan u baahnayn mar haddii carruurteennu qalin jabiyaan.
Maxaad ugu fadhiisanaysaa dhul baaxad leh oo leh qolal bannaan? Hoos u dhigista hawlgabku waxay kaa caawineysaa inaad ka xorowdo sinnaanta gurigaaga oo aad u adeegsato hawlgabka.
Intaa waxaa dheer, tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad ogaato inta lacag dheeraad ah ee aad u baahan doonto si aad hawlgab u noqoto.
Akhri Sidoo kale: Sida Looga Hawlgaliyo Talyaaniga 2021: Qiimaha & Shuruudaha
Tixgeli Qorshahaaga Kaydka Hawlgabka ee Diiwaangashan markaad xisaabinayso inta lacag ah ee aad u baahan doonto inaad hawlgabto (RRSP).
RRSP waa nooc ka mid ah koontada kaydka oo loogu talagalay inay ka caawiso dadka Kanada badbaadinta hawlgabka.
Wax ku biirinta RRSPs waa canshuur laga jari karo waxaana lagu maalgelin karaa siyaabo kala duwan.
Faa'iido kasta oo laga helo hantidaas badiyaa canshuur ma leh inta la maalgelinayo. Tani waxay kaa caawineysaa inaad dhisto faylalkaaga oo si raaxo leh uga fariisato.
Sanduuqa Dakhliga Hawl-gabka (RIF) ayaa ah dhaxalka RRSP, oo ah koontada hawlgabka ee cashuurtu dib u dhigtay.
Ka dib da'da 55, waxaad furi kartaa RIF. Ka dib da'da 71, marka ay tahay inaad xirto RRSP -gaaga, dheelitirka RRSP -gaaga oo dhan waxaa loo wareejiyaa RIF. Wareejinta RIF ma laha cawaaqib canshuureed.
TFSA waxay la mid tahay nooc kasta oo koonto kayd ah. Waxaad meel iska dhigi kartaa lacag kasta oo aad rabto (ilaa ugu badnaan ay dowladdu dejisay).
Waxa kale oo aad tirtiri kartaa wakhti kasta oo aad jeceshahay, iyada oo aan wax natiijo ah ka soo bixin. Markay lacagtu ku jirto koontada, waxay kasbataa dulsaar - dulsaar ka badan koontada kaydka caadiga ah.
Waxa lagu kala soocayo TFSA ayaa ah in dulsaarka sida caadiga ah lagu canshuurayo koonto aan xayndaab lahayn laguma canshuurayo TFSA.
Waxaa intaa dheer, si ka duwan koontada keydinta shatiga leh, maaliyaduhu waa canshuur-la'aan marka lagala noqdo.
Intee in le'eg ayuu qofku u baahan yahay si uu ugu fariisto Kanada?
Wadarta aad u baahan tahay hawlgabnimada waxaa lagu go'aamiyaa sida dakhligaaga iyo kharashyadu isu beddelaan marka aad gabowdo.
Guud ahaan, waxaad ku dadaali kartaa 70-80 boqolkiiba dakhligaaga hawlgabka kahor sanad kasta oo hawlgabkaaga ah.
Wax yar ayaad ku bixin kartaa kaydka, canshuuraha, iyo gaadiidka hawlgabnimada iyo wax badan oo ku saabsan hiwaayadaha, adeegyada, iyo daryeelka caafimaadka.
Waxaad isticmaali kartaa xisaabiyaha si aad u go'aamiso saamigaaga beddelka ugu habboon (waxaa loola jeedaa saamiga dakhligaaga shaqo ee aad ugu baahan lahayd hawlgab).
"Marka la xisaabinayo qiimaha hab-nololeedka hawlgabka, dadka badankoodu waxay u muuqdaan inay ilaashadaan heerkooda nololeed, oo sida caadiga ah ugu sarreeya 40-ka dambe illaa badhtamaha 50-meeyada," ayuu yidhi Steve Feinschreiber, madaxweyne ku-xigeenka sare ee Fidelity Financial Solutions.
"Nasiib wanaag, dad badan oo si ku filan u badbaadiyey hawlgabnimada ayaa xaqiijin doona himilooyinkooda maxaa yeelay wadartooda guud ee hawlgabka inta badan waa la dhimay marka laga reebo hal qayb oo muhiim ah - daryeel caafimaad."
Xeerka boqolkiiba 80 ayaa ah tilmaamaha lagu go'aaminayo waxaad awoodi kartid markaad hawlgab noqoto.
Tixgeli tiradaasi inay tahay meel macquul ah oo bilow ah, ka dibna isticmaal mushaharkaaga, hab -nololeedkaaga la filayo, iyo rajooyinka caafimaadka si ay kaaga caawiyaan inaad soo saarto qiyaas ka sii badan oo khuseeya kharashyada hawlgabka.
“Xaaladda hawlgab ee qoys walba waa mid gaar ah,” ayuu yiri Beau Zhao, oo ah agaasimaha Fidelity ee Xallinta Maaliyadeed.
Xusuusnow in noloshu dhacdo, waxayna burburin kartaa qorshahaaga hawlgabka. Natiijo ahaan, waxaad xisaabin kartaa fursadaha soo socda:
Xaaladaha caafimaad ee kugu qasbaya inaad si dhaqso ah uga fariisato sidii la filayay ama keeni kara biilal caafimaad oo aad looga filayay horaantii hawlgabka,
Carruurta ku tiirsan dhaqaale ahaan waalidkood markay hawlgab noqdaan,
Furiinka, iyo lacag -bixinta Guryaha oo aad u weyn,
Sicir -bararka baxsadka ah, ama burburka suuqa iyo wax kaloo badan.
Akhri Sidoo kale:10 Siyaabood Oo Jaban Oo Lacag Looga Helo Hawlgabka | 2021
Intee in leeg ayaad u Baahan Tahay Inaad Ka Hawlgasho Kanada 55?
Dadka intiisa badan, “xorriyadda 55” waxay ka badan tahay hal-ku-dhigga suuqgeynta marka loo eego xaqiiqda, laakiin dhab ahaan ma mid hawlgab ku noqon kara 55 jir Kanada gudaheeda oo weli ku naaloonaya oo ku raaxaysanaya hawlgabka kadib?
Xaqiiqdii, ayuu yidhi Evan Hickey, oo ah qorsheeye maaliyadeed oo ka tirsan RBC Financial Planning in Halifax. Xeeladdu waa in la dhiso qorshe maaliyadeed oo dabacsan.
"Qorshe qaado, hubi qorshahaas oo raac - sida ugu habboon qorsheeye maaliyadeed oo kula shaqayn kara, sannadaha oo dhan, si uu kaaga caawiyo in qorshahaagu noqdo mid dhab ah."
Mr. Hickey wuxuu soo jeedinayaa inuu ka jawaabo saddexda su'aalood ee soo socda si loo go'aamiyo inta lacag ah ee aad u baahan doonto si aad ugu noolaato hawlgabnimada, gaar ahaan sababta oo ah lacagtaadu waxay u badan tahay inay sii dheeraato:
Maxaad dhab ahaan u baahan doontaa inaad lacag ku bixiso hawlgabnimada?
Samee liis baahiyaha nolosha, sida cuntada, korontada, taleefanka gacanta, caymiska baabuurka, dharka, iyo canshuuraha hantida.
Maxaad lacag ugu bixin doonin hawlgabka?
Haddii aad wax ku darsanaysay Qorshaha Kaydinta Waxbarashada ee Diiwaangashan (RESP) oo carruurtaadu koray, hadda waxay isticmaalayaan lacagaha inta ay jaamacadda dhiganayaan, ama ay qalin jebiyeen, taasi waa hal kharash oo ka baxsan liiskaaga.
Waxaa la mid ah tan amaahda guryaha oo mar hore la bixiyay si buuxda. Ha iloobin kharashyada yar yar ee aanad bixin doonin, sida dharkaaga shaqada iyo kharashyada safarka.
Waa maxay kharashaadka cusub ee aad ka filayso hawlgabka?
Maadaama aad ka fikireyso inaad hawlgab noqoto goor hore, malaha maahan maxaa yeelay waxaad dib u fadhiisan kartaa oo aad daawan kartaa Netflix 30-ka sano ee soo socota.
Dadka hawlgabka ah xilliga hore waxay leeyihiin dano ama ahdaaf nololeed oo kale oo ay jeclaan lahaayeen inay fuliyaan inta ay weli caafimaad qabaan.
Dhab ahaantii, kharashaadka qaarkood way badan karaan sanadaha ugu horreeya ee hawlgabka, gaar ahaan haddii aad wax badan safartid, xitaa haddii kharashyada daryeelka caafimaad ee suurtogalka ah ay ka sarreeyaan.
Markaa ka fiirso waxa kuu noqon doona hawlgab nabdoon, oo daba dheeraada. Haddii ay u baahan tahay safar caalami ah, kondho ku yaal Arizona, laba maalmood toddobaadkii koorsada golf -ka, ama xitaa ku noqoshada dugsiga, maskaxda ku hay in xisaabaadkaaga hawlgabka iyo dheefaha dawladda ay tahay inay daboolaan kharashyadaas dheeraadka ah - iyo sidoo kale kharashyada nolosha aasaasiga ah.
Ku billow abuurista miisaaniyad qorshahaaga hawlgabka.
Qof walba baahidiisa maaliyadeed way kala duwanaan doontaa, sida uu sheegay Mr. Hickey, Sidaas darteed, waxaad samayn kartaa layli miisaaniyadeed si aad u qiimeyso shuruudaha dakhligaaga hawlgabka shaqsiyeed.
Kadib, markaad u sii dhawaato hawlgabka, wadahadalada aad la yeelato la-taliyahaaga maaliyadeed waxay u wareegi doontaa abuurista dakhli hawlgab oo cashuur-ku-ool ah iyo go'aaminta sida loo hubiyo in hantidaadu sii jiri doonto sannadahaaga hawlgabka.
Warka fiicani waa… Qorshaha Hawlgabka Kanada (CPP) iyo Badbaadada Waayeelka ayaa qayb ka noqon doona kaydka hawlgabka (OAS).
Marka la eego in celceliska hawlgabka Kanada uu ka helo hawlgabyadan ($ 14,865 labadii lamaane) qiyaastii $ 29,730 sanadkiiba, hawlgabnimada hore waxay u muuqan kartaa mid suurtogal u ah qaar ka mid ah kuwa ilmo -galeenka oo aan go'aan ka gaarin goorta ay hawlgab noqonayaan.
Markay timaaddo qorshayaasha hawlgabka Kanada, furaha ayaa ah in sida ugu dhakhsaha badan loo bilaabo.
Hadda waa waqtigii aad ka fikiri lahayd sidaad u maareyn lahayd kharashaadkaaga go'an ee mustaqbalka adiga oo aan gacan ka helin jeega mushaarka.
Haddii aadan hubin sida loo diyaariyo hawlgabka, waxaad la tashan kartaa qorsheeyaha maaliyadeed. Qiimee rajooyinkaaga, himilooyinkaaga, iyo rabitaankaaga inaad keydiso mustaqbalka.
Danta isku dhafan ayaa ah saaxiibkaaga ugu fiican, iyo in aad aad u sii diyaargarowdid ayaa ka doorbidaya in aadan diyaar garow fiican lahayn. Intee in le'eg ayaad rumaysan tahay inaad u baahan tahay hawlgabnimada?
Sida Looga Hawlgaliyo Talyaaniga 2021: Qiimaha & Shuruudaha
Ma waxaad qorsheyneysaa sanadahaaga dahabiga ah? Waa lagama maarmaan in lagu daro meesha lagu noolaado. Sababtoo ah waxaa jira…
Ka doodista mowduucyada sida xirfadaha, odoroska shaqada, rajada xirfaddu waxay u noqon kartaa qaar madadaalo leh kuwa kalena cabsi ayay u noqon kartaa. Waxa…
Safarrada dhalashada marna kama baxaan qaab -dhismeedka, nagu soo biir sidaan ku tusno 30 -ka meelood ee aad tagi karto…